45 Achịcha ahụekere achicha iji mee - Nri
45 Achịcha ahụekere ahụekere nke ị ga-arịọ maka sekọnd
45 Peanut Butter Desserts That Will Have You Begging
E nwere ihe ndị na-esi ísì ụtọ ole na ole dị ka ndị a hụrụ n'anya n'ụwa niile dị ka butter. Ọ bụ akara ngosi na sandwiches, ihe oriri na-egbu egbu na mgbakwunye na nri ndị na-atọ ụtọ na ụtụtụ smoothies na dị ka itinye, ọ na-eme anyị n'ezie chọrọ iji rie nkpuru osisi na akwukwo nri anyi. Mana o doro anya na ọ bụ ihe kachasị amasị ụtọ na-emeso . Nke a bụ nri nri ahuekere butter na 45 iji nwaa ịme n'ụlọ, site na kuki ruo na achịcha ruo n'ụlọ mmanya.
Njikọ: E Kwesịrị tedhapụ Feekere Ahụekere?
Mark Weinberg / Akwụkwọ dị na achịcha
1. Achịcha ahụekere ahụekere achicha na Meringue Meringue
Gradelọ akwụkwọ PB&J gụsịrị akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ gị, etoola. Ọmarịcha swoops nke pink, mkpụrụ osisi meringue na-eme ka achịcha dị ka a dọpụrụ ya n'akụkọ ifo.
2. Fluffernutter Quesadilla
Mgbe afọ gị na-ebe akwa eji megharịa ọnụ, biko! mana ị nwere naanị nkeji iri, tụgharịa na nke a ooey-gooey. (Na tupu ị jụọ, ee, anyị nwere Marshmallow Fluff mgbe niile n'ụlọ anyị.)
Yumna Jawad / Nwee ezigbo nri
3. 3-Cookies peekere Butter Cookies
Ọbụghị naanị na ị nwere ike ịnwe ngwa ọ bụla ịchọrọ na kichin gị ugbu a, mana kuki ndị a na-ewekwa naanị nkeji 20 iji mee site na mbido ruo n'isi.
Foto: Mark Weinberg / ygha: Erin McDowell
4. Ahụekere ahụekere na jelii Blondies
Nostalgia siri ike na nke a. Jiri akpa piping ma ọ bụ akpa plastic kacha elu na nkuku nwere nkuku iji gbanye jam mkpụrụ maka iji aka na-emecha.
5. Kachasi Mkpọ Mmanụ Kasị Mkpa n’ Worldwa
Ndo, anyị chọrọ otu nkeji. Bụrụ anyị gbawara. Anyị achọtala ugbu a maka ojiji kachasị maka pan pan nke itoolu.
6. Ahụekere Ahụekere
Nke a nkeji iri mgbasa bụ decadent, ụtọ na tangy, ekele na mgbakwunye na nke pịa topping na ude cheese.
7. Salted Peanut Butter Butter Cup mokwụ Cuptọ
Say na-ekwu nri ụtụtụ, anyị na-ekwu dezaati . N’agbanyeghi ihe ndi ahu siri ike, o ka n’enye obi uto imecha nri anyasi. (Anyị agaghị agwa gị ma ị gbanwere protein whey wheins maka ihe nracha .)
8. Anaghị akpọọ nkụ chọkọleeti ahụekere mmanya Pretzel
Anyị anaghị egwu egwu-Ogwe ndị a achọghị otu sekọnd na oven iji zukọta. Ọ dị mfe dịka ịkpụkọta ihe a na-eme na presszel jikọrọ ọnụ, gbazee chocolate na ahụekere bọta, wee hapụ ya ka o sie ike na ngwa nju oyi.
9. Reese’s Peanut Butter Cup Brownies nke Reese na-ete mmanụ aanụ
Brownies na-atọ ụtọ na ha. Site na ịkpụ Reese's Peanut Butter Cup na mix, ha bụ chi. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị enweghị ike ijikwa ihe eji arụ ọrụ peanut butter swirl n’elu.
10. Achịcha ahụekere na jelii sandwich
Kuki> achịcha. Enweghi ike ịhọrọ mkpụrụ osisi ọ bụla ịchọrọ, mana anyị na-ele mmadụ anya na strawberry.
11. Ahụekere Achịcha ahụekere
Nke a na-emeso mkpu mkpu n'oge okpomọkụ picnic ka anyị, ebe ọ bụ na ọ na-eje ozi oyi na-adịghị achọ ihe ọ bụla mmiri. Ntụziaka bụ cinch-naanị ihe ịma aka ga-echere ya ka ọ sie ike tupu igwu ala.
12. Kachasị PB&J S’mores
Nwa gị n'ime nwere ike ịnọdụ ala maka mashup a na-enweghị atụ. Kama ị na-egwu otu iberibe chọkọletị n'agbata gram abụọ graham na-enwe olileanya na marshmallow dị ọkụ iji gbazee ya, achịcha niile etinyere na chocolate gbazee kama.
Erin na-egosi nke ọma
13. Ahụike Mkpụrụ Mkpụrụ Butter-Yogọt Pizzas
Ọ baghị uru ikwu, ụmụ gị ga-enwe ntiwapụ na-achọ mma nke ha. Ugbu a, olee ebe anyị ga-amalite: strawberries na unere ma ọ bụ bluuberi na apụl ?
14. Obere jelii na ahụekere Butter Pop Tarts
Ha pere mpe, ya mere gaanụ wee gwọọ onwe gị abụọ. Ma ọ bụ atọ. Ma ọ bụ ise…
Averie Osi nri
15. Donchịcha Chocolate-Ahụekere Butter na Vanilla-ahụekere Butter Glaze
Ndị a nri ụtụtụ a na-eme ụmụ ọhụrụ na pan achicha karịa ka e ghere eghe. Ehee, nnukwu ite nke na-agbọ mmanụ. (I nwekwara ike ime ha a muffin tin , BTW.)
16. Achịcha ahụekere Chocolate Chocolate Kuki
Aka ndị a mara mma nwere ihe nzuzo. Ọ dị mma, dị mma, anyị ga-agwa gị: Ọ bụ ngwa ngwa espresso ntụ ntụ.
Ọkara Owuwe Ọkara
17. Ahụekere Butter Cup Fudge Brownies
Ezigbo eze gị nwere ọrụ ya maka ya. Gwa ya ka ọ gbanye mmiri ara ehi chocolate brownies nke ejiri dollops nke ahụekere bọta na ihe kachasị mfe fudge frosting nke oge niile.
Kuki na Kate
18. Nri Bute Mmanụ Mmanụ a Honụ na Mmanụ a Iceụ Ice cream
Free nke mmiri ara ehi na tinye sugar? Kutuo anyị, anyị na-arọ nrọ. Oh, ma nyefee fudge dị ọkụ.
Njọ na-atọ ụtọ
19. Unere Mịrịe Butter Chocolate Mgba Muffins
A na-akpọ chocolate ka ọ bụrụ nri ụtụtụ n'ụlọ anyị. Ntụziaka na-achọ ka ahụekere peekere, nke na-enye muffins dị nro ihe ederede ederede.
Ndụ mara mma na ala ịta ahịhịa
20. Achịcha Butekerekere
Ọ bụghị na ọ hụrụ n'anya? Osisi nnu-ụtọ nke ụlọ Oreo na-eburu ya n'elu.
21. Ahụekere ahụekere na Jelii apụta
Ha dị ka pawuda na-apụta, naanị ndochi bụ swapped maka mix nke ahuekere bọta, agba aja aja, bọta na strawberry jam.
Sally si Addakingụ ọgwụ ọjọọ riri ahụ
22. Achịcha Achịcha Ekere
Mee ụbọchị ọ bụla gị ụbọchị ọmụmụ site n'enyemaka nke ihe ụtọ ndị a dị mfe. Mmanụ, utoojoo ude na mmiri ara ehi na-eme ka ha dị nro ma dịkwa mmiri mmiri.
23. Caramel Ahụekere But
Vanilla yogọt + creamy PB + ụlọ ahịa zụtara caramel sauce = nke kachasị mfe mma-maka-ị eji megharịa ọnụ mgbe.
24. Achịcha ahụekere ahụekere
Dọ aka na ntị: ’re ga-achọ ịgbanye ahụekere butter na-ekpo ọkụ n'ihe niile, site na ihe nracha ka granola.
25. Nri na Sugar Brown Sugar Peanut Butter Cookies
Ihe ịchọ mma ndị a kpuchiri na chocolate na-etinye n'ime akpa ikuku maka ụbọchị anọ… mana anyị nwere obi abụọ na ha ga-anọ otu abalị.
26. Ahụekere Ahụekere S’mores Pizza
Chee mmanụ a honeyụ-ọka wit Pizza okwute ejiri PB ihendori, chocolate, mini marshmallows na mmanụ a honeyụ roara n'ọkụ. N'elu ndaeyo nri site na ịmecha achịcha ahụ na barbecue.
27. Achịcha Chocolate Cupcakes
Ọbụghị naanị na enwere koko koko gbara ọchịchịrị ma sie ike kọfị na ogbe, ma achicha achicha ahu bu kwa onye anakpo ahihia nke salted caramel.
28. Chocolate Ahụekere Butter Cheesecake Ogwe
Utoojoo ude ma chiiz chiiz na ahuekere butter na-ejuputa na-enye ogwe ndị ahụ nri kwesịrị ekwesị.
29. Ogwe osisi pịkọlị Chocolate atọ nke nwere okpukpu atọ
Ọ dịghị mmiri achọrọ bụ egwu na ntị anyị. Naanị ihe ịkwesịrị ịdọrọ ndị a bụ ngwa ndakwa nri na ngwa nju oyi.
30. Akwukwo Akwukwo Akwukwo Akwukwo Akwukwo Miri
Ezie na gbazee PB bụ kwesịrị maka topping, achicha na-eji ahụekere butter ntụ ntụ (yup, otu ihe ahụ ị tinyere n'ụtụtụ gị iretọ ) Na ntụ ọka aki oyibo kama ntụ ọka wit.
31. Mpekere Mpekere Mpekere Mpekere Mpekere Mpekere Mpeepe Mpekere Mpekere
Obi dị anyị ụtọ * na anyị ekwesịghị ichere ka mama m tinye otu n’ime igbe nri ehihie anyị ka anyị wee mezie oatmeal cream pie pie ọzọ.
32. Ultimate Triple-Layer Chocolate Bourbon Peanut Butter Buckeye achicha
Chocolate frosting, ahụekere butter frosting na chocolate-bourbon ganache? Kutuo anyị, anyị na-arọ nrọ. Dabere na mkpụrụ osisi epic a oge ọ bụla ịchọrọ ịmasị igwe mmadụ .
33. Kukii Bute Akwukwo Miri
Flaxseed nri ejikọ mgwakota agwa ọnụ seamlessly, ọ dịghị butter ma ọ bụ akwa dị mkpa.
34. Anaghị akpọọ ite Butterscotch Ahụekere aterụ arata
Ọ bụrụ n’inwere nkeji iri, ọgwụgwọ a dị mma dị nso. Ihe nzuzo ya ekpomeekpo? Ọ bụghị shuga, kama ọ bụ spoons ole na ole nke bọta butterscotch pudding.
35. Brown Kere Butekere Akwukwo Mbara Kuki
N'ikwu eziokwu, ọ bụrụ na enweghị okooko PB ọ bụla na swap kuki, ọ bụ ọbụna ezumike?
36. Chocolate Milk Chocolate na Ahụekere Butlon Blondies
Otu-nnukwu efere Ezi ntụziaka nke ahu gha ahapuru gi di na nri di nma> ihe nile.
Nnu na Ifufe
37. Chocolate Almọnd Butter Cup na almọnd bọta swirl Ice ude
Ọ bụrụ na ị nwere eke almọnd bọta na pantiri gị, kudos. Ọ bụrụ na i meghị ya, bọta ahụekere (na obere iko PB) ga-arụ ọrụ nke ọma.
38. Ahụekere ahụekere na Jelii na-ata achịcha
Nke a bara nnukwu uru na otu otu skillet ma na-atọ ụtọ na ezigbo maple sirop na dollops nke ọkacha mmasị gị jam. Ma ị na-ahụ ya dị ka nri ụtụtụ na-atọ ụtọ ma ọ bụ ihe eji eme protein, ọ dị gị n’aka.
39. Lightened-Chocolate Choekere Ahụekere Upside-Down Banana achicha
BRB, na-ejuputa mmiri ịsa ahụ anyị na ahụekere peanut butter-caramel sauce.
Wepụta na Pennies
40. Mfe Buckeyes
Ihe isii na naanị 20 nkeji ọrụ? Nwere ike ịkụ nzọ anyị ga-enye ndị a niile na nke anyị Ekeresimesi ndepụta. Na maka Ụbọchị Valentine . Na Ista. Na OK, ọ bụla e nyere Tuesday…
41. Achịcha achicha ntụ ntụ ahụlị bụ Churro Cupcakes
’Re nọ naanị ọkara awa site na bliss-banana bliss. Gbanwee butter maka mmanụ aki oyibo na obereekere ahụekere maka almọnd butter ma ọ bụrụ na ị dị Paleo .
42. Iberi nkwu ‘Chocolate Chocolate-Ekere Ahụhụ Kuki
Kuki kuki na-adịghị agafe agafe maka ihe kpatara ya. Ka ị na-emebiga ihe ókè karịa ị na-achọ ha mma, ndị ọbịa gị agaghị amata obere mbọ ha gbara iji mee.
43. Healthy Peanut Butter Rice Krispie Na-emeso
Kedu ihe ha ji dị gị mma karịa ụdị ụlọ ahịa echekwara, ị na-ajụ? Ha na eji mmanu peekere creamy, osikapa osikapa aja aja ma jiri syrup maple na-ato ya uto.
Elija vampire diaries omee
44. 4-Chocolate Chocolate-Kpuchiri Peanut Butter-States
Mara mma iji jee ozi na a nri abalị , dị mfe iji kwadebe onwe gị na ijiji.
45. Nkeji 5-Oge Akwukwo Osisi Mpeepe Akwukwo
Ọ dịghị ihe ọ bụla butter butter (na maple syrup) enweghị ike ime. Mee ya na ice cream ma ọ bụ jiri sliced apụl .
Njikọ: The 10 Healthy Peanut Butter Brands, Dị ka Nutritionist si kwuo
mwepụ nke ntutu ihu ihu igwe
Nri china na china
akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii na-eji mmetụta
ọgwụgwọ agwọ ọrịa maka ntutu ihu
na-adịbeghị anya ihunanya Hollywood fim